China Yueqing AISO သည် YH10W 24kV လျှပ်စီးမြင့်မားသောစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း | Aiso
H ကိုအမျိုးအစား 63A 3Pole MCCB ပုံသွင်းဖြစ်ရပ်မှန်တိုက်နယ်အနိုင်အထက်
ZW32-12 3CT / PT / ZERO / G / Controller အပြင်ဘက်ဝင်ရိုးစွန်းတောင် ...
၅၄၀mm creepage အကွာအဝေး ၂၄kv-27kv 100a ဖျူး ...
24kV 200amps မြင့်မားသောဗို့အားသည်စျေးနှုန်းနှင့်အတူဖျူးကိုဖြတ်တောက်
လျှပ်စစ်လျှပ်စီးအမှတ်တံဆိပ် AISO Supply 3kv ...
ရှည်လျားသောအာမခံချက်မြင့်မားသော voltage hrc 24kv 200amp fuse cuto ...
ZW32 / Zero / G 24kV ဝင်ရိုးစွန်းအလိုအလျောက် Recloser Cir ...
ZW32-12 Series ပြင်ပမြင့်ဗို့အား Vacuum circuitb...
Outdoor 33kV 35kV 1250A Vacuum Circuit Breaker နှင့်အတူ ...
Yueqing AISO သည် YH10W 24kV လျှပ်စီးမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:၁၀-၂၀ ဒေါ်လာ / ယူအက်စ်အစိတ်အပိုင်းများကိုသုံးပါ:၁၀ ပိုဒ်Supply နိုင်ခြင်း:1000 အစိတ်အပိုင်းငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ:TT, LC, အခြားသူများ အမှတ်အသားများ (Tags)
အသေးစိတ် မူလနေရာ：Zhejiang, တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်：AISO / OEMမော်ဒယ်နံပါတ်：YH10Wထုတ်ကုန်အမည်：24kv လျှပ်စီးမြင့်တက် arresterSystem ကိုအဆင့်သတ်မှတ်သူ voltag： 24kVလက်ရှိအားသွင်း：10kAထုပ်ပိုးအသေးစိတ်：ပုံးသို့မဟုတ်အထပ်သားအမှုအားဖြင့်ဆိပ်ကမ်း：Ningbo သို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်း
သွပ်အောက်ဆိုဒ် arrester (24kv surge arrester) သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးဗို့အားကာကွယ်ပေးသောကိရိယာဖြစ်သည်။အဓိကသော့ချက်အရာ၏ risistor disc သည်အဓိကအားဖြင့် zine oxide arrester ကိုပြုလုပ်သည်။ သမားရိုးကျ silicon carbide arrester နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကထုတ်ကုန်၏ဤကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်သည် resistor disc ၏ volt-Ampere ၏စရိုက်လက္ခဏာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး over-voltage တွင် over-voltage စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် rad -ical ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဖမ်းဆီးသူများ။
အသုံးပြုမှု & အင်္ဂါရပ်
Zinc Oxide light arrester သည် AC power systems ရှိလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအား atmosheric over- voltage နှင့် operating over-voltage ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
1. အသေးစားအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသော၊ ထိခိုက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်တိုက်မိခြင်းမရှိခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တပ်ဆင်ခြင်း၊ switch အခန်းအတွင်း၌အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။2. အထူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ခြုံငုံဖိအားပုံသွင်းခြင်း၊ လေကွာဟမှုမရှိ၊ ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်၊3. ကြီးမားသော creepage အကွာအဝေး, ကောင်းမွန်သော hydrophobicity, ခိုင်မာတဲ့အစွန်းအထင်းခုခံ, တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လျှော့ချလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။4. ထူးခြားသောသွပ်အောက်ဆိုဒ်၏အမျိုးမျိုးသောပုံသေနည်း၊ အသေးစားယိုစိမ့်မှု၊ အိုမင်းခြင်းနှေးကွေးမှု၊
DC ရည်ညွှန်းသောဗို့အား၊ စတုဂံစီးဆင်းမှုစွမ်းရည်နှင့်မြင့်မားသောလက်ရှိနှင့်ကြီးမားသောလက်ရှိခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်သည်စံသတ်မှတ်ချက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
ပါဝါကြိမ်နှုန်း: 48Hz ~ 60Hzပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်: -40 ° C ~ + 40 ° Cအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်း: 35m / s ထက်မပိုစေပါအမြင့် - ၂၀၀၀ မီတာမကျော်ပါငလျင်ပြင်းအား - ၈ ဒီဂရီမကျော်ပါစေနှင့်ရေခဲအထူ - ၁၀ မီတာထက်မပိုပါ။ကာလရှည်သက်ဆိုင်သော voltage သည်အများဆုံး coutinuous operating voltage ထက်မပိုပါ။
YH10W-24 24 ၁၉.၅ 76.0 ၆၁.၆ 72 250 100
ရှေ့သို့ 9kV polymeric လျှပ်စီးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့်အတူကျဆင်းနေသည်
နောက်တစ်ခု: ကြွေထည်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ 24kV 100a High Voltage Electrical Fuse Cutout
လျှပ်စီး Arrester စျေး
Lightning Arrester အမျိုးအစားများ
Lightning Arrester မြင့်တက်
လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်း AISO ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ...
Windi နှင့်အတူ Toroidal Core အီလက်ထရောနစ်ထရန်စဖော်မာ ...
ကြွေထည်ပစ္စည်းများအမျိုးအစားများဖြစ်သော 24kV 100a High Voltage E ...
VD 9-12 အတွင်းပိုင်းအမြဲတမ်းသံလိုက် Vacuum Circui ...
L အမျိုးအစား 250A 3Pole MCCB ပုံသွင်း Case Circuit Bre ...